नेपाली सङ्गीतमा किन आकर्षित भए विदेशी सङ्गीतकर्मी?
बुलु मुकारुङ शनिबार, भदौ २६, २०७८, ०९:००
काठमाडौँमा भएको कन्सर्टमा ब्रायन आडम्ससँग गीत गाउँदै ब्रिन्दा सिंह। तस्बिर सौजन्य : लेक्सलिम्बू डटकम
विश्व चर्चित गायक ब्रायन आडम्स ‘कन्सर्ट’का लागि २०६७ सालमा नेपाल आएका थिए। दशरथ रंगशालामा विशाल म्युजिक कन्सर्ट भएको थियो। कन्सर्टमा उनले स्टेजबाट ‘मेरो गीत कसले गाउन सक्छ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा भिडबाट एक युवतीले हात उठाइन्। उनलाई स्टेजमा उतारियो। ब्रायन आडम्ससँगै ती युवतीले ‘समर अफ सिक्स्टी नाइन’, ‘एभ्रि थिङ्स आइ डू’ गीत गाइन्। ती थिइन्–सङ्गीतकार विजय सिंह मुनालकी सुपुत्री ब्रिन्दा सिंह।
ब्रिन्दा सिंहलाई ब्रायन आडम्सका गीत कन्ठै रहेछ। तर, के ब्रायन आडम्सलाई जस्तै हाम्रा गीत विश्वभरिका मानिसले सुन्छन्? विदेशी सङ्गीतकर्मीहरु नेपाली गीत गाउन तयार छन्? यो लेख यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।
नेपाली गीत–सङ्गीत क्षेत्रमा भारतीय, पाकिस्तानी, बंगाली कलाकार निकै अघिदेखि जोडिएका हुन्। दार्जीलिङ, सिक्किम, भुटान, देहरादून, बर्मा, असाम आदि क्षेत्रका नेपाली भाषी सङ्गीतकर्मीले नेपाली गीत गाएका छन्। ती गीतलाई हामी नेपालीकै वा नेपाली कलाकारले नै गाएको गीत ठान्छौँ। अथवा त्यस्तो प्रचलन चलिआएको छ। तर, यसले धेरै माने राखेको देखिँदैन।
यस बेला नेपाली गीत–सङ्गीत विश्वभरि फैलिनुमा मुख्यतः नेपालीकै कारण हो। विभिन्न पेसा, व्यवसाय वा वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरु अनेक मुलुक पुगे। त्यसपछि नेपाली गीत–सङ्गीतले पनि ती मुलुकमा बजार पाए। नेपाली सुरकर्मीले केही कमाउने मौका पाए। हाम्रो गीत–सङ्गीतको प्रचार विदेसिएका नेपालीमा मात्र सीमित भने छैन।
नेपाली गीत–सङ्गीतमा विदेशी कलाकार र सोधकर्ताको चासो बढिरहेको छ। अन्य मुलुकमा जनस्तरमा पनि चासो बढिरहेको छ। किनकि, विश्वका ठूला–ठूला मुलुकका सङ्गीतकर्मी नेपाल आएर गीत–सङ्गीतको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न थालेका छन्। जसले नेपाली सङ्गीतको विश्व बजार खुला हुँदै आइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ।
नेपाली सङ्गीतमा किन आकर्षित भए विदेशी सङ्गीतकर्मी? यो एउटा अहम् प्रश्न हो। विश्व चर्चित मोजार्ट, बिथोवन, बाख, सेगोभिया या विश्व चर्चित गायक समूह बोनि–एम, अब्बा, सिग, इगल्स् वा बीबी किङ, दानियल बुन, रड स्टेवर्ड, लिवनल रिकी, रिकार्ड माक्र्स, केन्नी रोजर्स, स्टिभ वन्डर, जोन डेन्भर, लुइज आमस्ट्रङ, इल्टन जोन, कितारो, तला, गुलाम अली आदि विश्व प्रसिद्ध सङ्गीतकर्मीका देशबाट पनि नेपाल आइ नेपाली सङ्गीतको ज्ञानार्जन, तथा सङ्गीत प्रस्तुति गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ। तर, विदेशीहरू केवल हिमाल हेर्न, चढ्न, घुम्न र खोलामा राफ्टिङ खेल्न मात्र आउँछन् भन्ने एकोहोरो सोच राज्य सत्ताकै छ।
विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाकै कुरा उठाउँदा डानियल एन बर्चले बीस वर्ष बसेर नेपालमा सङ्गीतको अध्ययन गरेका थिए। उनले गोपालनाथ योगी, मोहनप्रसाद जोशी, मोहनसुन्दर श्रेष्ठ आदि शास्त्रीय सङ्गीतका धुरन्धर विज्ञसँग सङ्गीत प्रशिक्षण लिएका थिए। गायक जस ब्रडीले गायक खेम गुरुङसँग संयुक्त रूमा युगल गायनको क्यासेट एल्बम निकालेका थिए। पछिल्लो समय आना स्टिरले लोकदोहोरी गीतमा पीएचडी उपाधि लिएकी थिइन्। कुनै नेपालीले लोकदोहोरी गीतमा पीएचडी गरेको अझैसम्म देखिँदैन।
म्युजिकमा खासै चर्चित थिएन क्यानडा। तर ब्रायन आडम्स र एभ्रियलाले गर्दा क्यानडाको संगीत विश्व चर्चित भयो। उनीहरूले बाहिरी मुलुकमा गई दिएका सङ्गीत प्रस्तुतिले विश्व चर्चा पायो। ब्रायन आडम्स र एभ्रियलालाई विश्वमा क्यानडा चिनाउने कलाकारका रूपमा पनि हेरिन्छ। क्यानडामा जनस्तर तथा राज्यबाट ती कलाकारलाई निकै सम्मान गरिएको छ।
यसरी नै जापानको कलाकार समूह गोजाइजोले सन् १९८० दशकमा नेपाल आएर दशरथ रंगशालामा गरेको साङ्गीतिक प्रस्तुति निक्कै चर्चित बनेको थियो। त्यस समूहले नेपाली गीत ‘हाम्रो केटा केटीको नाम राम्रो छ’ गाउँदा भरिभराउ रंगशालाका दर्शक स्वःस्फुर्त नाच्न थालेका थिए।
जापानका अकिता सान पियानो वादक थिए। उनले पाटनकी नेवार समुदायकी कन्यासँग बिहे गरेका थिए। बिहेपछि यतै बसे। उनले नेपालमा थन्केर बसेका थुप्रै पियानो ट्युनिङ र मर्मतसमेत गरेका थिए।
उनी नेपालकै सदाबहार गीतहरू स्वरलिपिमा उतार्ने कार्यमा लागे। तर, संस्थागत रूपमा कतैबाट पनि सहयोग मिलेन। त्यैपनि सदाकाल नेपाली सङ्गीतको उत्थानमा लागि रहे। केही वर्षअघि उनले नेपालमै प्राण त्याग गरे।
नेपाली भाषा पढ्ने क्रममा नेपाल आएका हारुहितो नोजुले गीतकार मञ्जुलका एक दर्जन अधिक गीतहरू सङ्गीतवद्ध गरेका छन्। धेरैजसो गीत गायिका सुनिता सुब्बाले गाएकी छन्। नेपाली गीत गाउने अर्को गायिका हुन्, मिका। उनले प्रसिद्ध गायिका मीरा राणासँग गायनको साधना अभ्यास गरेकी थिइन्।
फ्रान्सका विश्व प्रसिद्ध ज्याज बेला (भ्वाइलीन) वादक हुन्, डिडियल लक उड। उनले नेपाल आइ सोलो ज्याज म्युजिक कन्सर्ट पनि गरेका थिए। त्योभन्दा अघि ‘सेक्सो मानिया’ नामक ज्याज म्युजिक प्रस्तुति एकेडेमीको हलमा भएको थियो, जसमा सातवटा सेक्सोफोन वादकका साथ एक गायिकाले प्रस्तुति दिएकी थिइन्। नेपालको लागि उक्त कार्यक्रम नौलो प्रयोग थियो।
सङ्गीत अन्वेषक कारोल टिङ्गी बेलायतकी नागरिक हुन्। उनले नेपालको परम्परागत सङ्गीत ‘पञ्चैबाजा’को खोज–अध्ययन गरी ‘हार्ट बिट अफ नेपाल ः द पञ्चैबाजा’ पुस्तक सन् १९९० मा प्रकाशन गरेकी छन्। अष्ट्रियाको भियानाबाट आएर २०६४ सालमा मिस टीना वागले प्रसिद्ध सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ, सङ्गीत अन्वेषक रामशरण दर्नाल र स्वयम् लेखक समेतको बायोग्राफिक अन्तरवार्ता लिइ भियाना रेडियोबाट प्रसारण गरेकी थिइन्।
नेपाली गीत गाउने भारतीय कलाकारहरू धेरै छन्। जस्तै, लता मंगेशकर, आशा भोस्ले, मोहमद रफी, मान्नाडे, कैलाश खेर, कुमार सानु, जयदेव, एलिसा चिनोइ, उषा मंगेशकर, कविता कृष्णमुर्ति, पंकज उदास, भूपेन हजारिका, महेन्द्र कपुर, सुरेश वाडकर, सोनु निगम, साधना सरगम, शब्बीर कुमार छन्। त्यस्तै गीता दत्त, अनुप जलौटा, अनुराधा पोडवाल, अनुपमा देशपाण्डे, अभिजित, अमरसिंह जेसल, सुरेश कुमार, सञ्जिवनी, शैलेन्द्र सिंह, ओम दत्त, दिलराज कौर, पिनाज मसानी, विनोद राठौर, हेमा सरदेसाई, श्रेया घोषाल, भी बल्सारा, भूपेन्द्र सिंह, सपना मुखर्जी, सागरिका मुखर्जी, सान आदिले पनि नेपाली गीत गाएका छन्। अधिकांश गीत चलचित्रका छन्। गायिका हेमलताले नेपाली गायिका ज्ञानु राणासँग चार–पाँचवटा लोकगीत पनि गाएकी छन्। ‘मन कति रोयो रोयो, आशुँ कति झ¥यो, सँधै सँधै छट्पटियो जिन्दगी यो’ (रचना– पवन चामलिङ), बोलको गीत कैलाश खेरले गाएका छन्।
विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक गुलाम अली, मेहदी हसन, शौकत अली, अनवर रफी साथै बंगाली कलाकार रेबिका सफिउल्लाह, समिमा सिद्धिकी आदिले पनि नेपाली गीत गाएका छन्। गुलाम अलीले ‘गाजालु ती ठूला–ठूला आँखा’ र ‘किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ’ गाएका छन्। मविवि शाहको रचनामा रहेका ती दुवै गीतमध्ये पहिलो नातिकाजीले र दोस्रो अम्बर गुरुङले पहिल्यै गाइसकेका थिए। मेहदी हसनले चाँदनी शाहका गीतहरू गाएका छन्।
शौकत अलीले मविवि शाहकै ‘वर्षात्को एक राति एक्लो थिएँ कौशीमाथि’ बोलको गीत गाएका छन्। तर, त्यो गीत त्यति चर्चित बन्नसकेन। बंगाली गायिका रेबिका सफिउल्लाहले ‘तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा, वनैमा लौ माया नमारे’ (रचना– राजकुमार शाक्य), बोलको गीत गाएकी छन्। उक्त गीत गाएर पन्नाकाजी सुपर हिट भएका थिए। समिमा सिद्धिकीले नातिकाजीको सङ्गीतमा ‘तिमीभरि पोखिएका माया समेटेर, भाग्दै गयो जिन्दगानी माया नभेटेर’ (रचना लय संग्रौला) गाएकी छिन्।
चीन, रुस आदि देशका कलाकारले पनि नेपाली गीत गाएको पाइन्छ। उनीहरुको सांस्कृतिक समूह घुम्नका लागि र कार्यक्रम लिएर नेपाल आउँदा साङगीतिक प्रस्तुति दिएको पाइन्छ। हिजोआज अफ्रिकी मुलुकबाट आएका शरणार्थी आदिले पनि नेपाली गीत गाउन थालेको युटुबलगायत मिडियामा देखिन थालेको छ। तिनले नेपाली साथै नेवारी गीत पनि गाउँछन्।
यसरी नेपाली सङ्गीत क्षेत्र विश्वको विपुल फैलावटमा पुग्नु उल्लेखनीय कुरा हो। गीत–सङ्गीतका माध्यमबाट पनि देश, मुलक र मुलुकवासी संसारभर चिनिनु गौरवको विषय हो। यसले नेपाली गीत–सङ्गीतको प्रवद्र्धन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। आर्थिक उन्नतिको गोरेटो पनि खनिन सक्छ।
अहिले भन्ने गरिन्छ, नेपाली सङ्गीतमा विकृति आयो। चर्चित बन्ने होडबाजीमा उत्ताउला र बेढंगका गीत पनि बजारमा आए। लोकगीतकै कुरा गर्दा रत्यौली र तीजका गीत छुट्याउन कठिन भयो। नारी प्रधान लोकगीत वा नाचमा पनि पुरुषहरूको हस्तक्षेपकारी प्रवेश हुन थाल्यो। गीत सुन्ने गरिन्थ्यो, अब हेर्न थालिएको छ। हेर्नका लागि गीत बन्छन्।
केही गीत सबै परिवार एकै स्थानमा बसेर हेर्न नसकिने खालका छन्। गीत र दृश्यको तुकबन्दीले कहीँ भेट नखाएको पनि देखियो।
तर, नेपाली गीत–सङ्गीतमा विकृति मात्र छैन। पश्चिमा र अन्य विदेशीले पनि नेपाली गीतलाई नजिकबाट अध्ययन गर्न थालेका छन्। यति धेरै विदेशी कलाकार नेपाली सङ्गीतसँग जोडिनु कृत, विकृतभन्दा पनि स्वीकृत हुनु हो। नेपालका चुली–चुचुरा चढ्न आएका हुन् या नदी खोलामा बिहार गर्न, धर्मकर्ममा आएका हुन् वा समाज अध्ययनका लागि, ती आफ्ना देश फर्किँदा ‘रेसम फिरिरी’ लोकलय लिएरै जाने गरेको देखिन्छ। के यो नेपाली गीत–सङ्गीतको विस्तार विस्तृतीकरण होइन?
कुनै बेला अरुण थापाले गाएको ‘ऋतुहरूमा तिमी’ (रचना राजेन्द्र रिजाल, सङ्गीत राम थापा) बोलको गीत बीबीसी नेपाली सेवाले गरेको सर्वेक्षणमा विश्व चर्चित दश गीतमा पर्न सफल भएको थियो। यस्ता उदाहरणलाई मध्यनजर राख्दै नेपाली सङ्गीतमा विकृति मात्र आइरहेको छैन, समृद्धि पनि साथसाथै अगाडि बढिरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ।
पूर्वका गोठाले–ढाक्रे लोकगीत : न रहे गोठाला र ढाक्रे, न त सुनिन्छन् लाेकभाका
नेपाली आधुनिक सङ्गीतको १०० वर्ष : सेतुरामदेखि डिजिटल युगसम्म
गुन्द्रीबजारको गोप्यो गीत